Maxay yihiin dhacdooyinka muraayadda dhoobka ah? Ilaalinta ciriiriga ee dhagaxyada
Gemstones phenomenon farsamada
Gemstones phenomena aragti ah ee ka yimaada habka iftiinka isdhexgalka leh qaab dhismeedka crystalline ee dhagax dhagax. Is-dhexgalka ama fara-gelinta waxay noqon kartaa qaab firfircoon, iftiiminta, jabinta, kala-qaadista, nuugista ama gudbinta.
Adularescence waa ifafaale sheen buluug ah oo ka tarjumaya dusha sare ee cabochon ee Moonstone. Iftiinka shimmer wuxuu ka yimaadaa isdhexgalka iftiinka oo leh lakabyo yar yar oo "albite" ah oo ku jira moonstones. Dhumucda lakabka kristantarradan yaryar ayaa go'aamiya tayada buluug buluug ah. Lakab khafiif ah, ayaa sifiican ugafiican flash-ka buluuga ah. Tani waxay badanaa u muuqataa inay tahay saameyn iftiin leh oo billow ah. Moonstone waa orthoclase feldspars, magac kale waa "selenite". Roomaanku waxay ugu yeedheen Astrion.
Gashaddaha badanaa waxay doortaan inay gooyaan qaababka kabadhada, marka dhagxaanta ay tayadoodu hooseeyso. Goobaha iyo dhagaxyada sida marka uu iftiinku ku dhajiyo dusha cabokon oo uu sameeyo raajo u eg, waxaa dhacda in la yiraahdo asterism. Waxaa jira xayaysiin 4 iyo xiddigaha 6 caadi ahaan la arkay. Tani waxay dhacdaa marka wacyigelinta irbadda sida galka ama silcka hoostiisa gudaheeda ay ku jiraan wax ka badan hal xagal.
Laga soo bilaabo magaca faransiiska "Chat" micnaheedu waa bisad. Wadahadalku wuxuu loola jeedaa dhacdo la mid ah furitaanka iyo xiridda isha bisadda. Waxaan ku daawan karnaa jawiga indhaha ee bisadda chrysoberyl oo leh caddeyn weyn. Gemooyinka indhaha ee bisadu waxay leeyihiin hal farood oo fiiqan, mararka qaarkoodna laba ama saddex guutooyin, oo ku dul wareegaya dusha sare ee dabo dabka Dhagxaanta indhaha bisadda ee qaab cabochon ayaa la jaray sheekaysiga muujinta. Cirbadaha toosan ee qaabdhismeedka muraayadda dhagaxu waa mid ku tiirsan ifafaalaha. Marka marka iftiinku ku soo dul dhaco, fiiq fiiqan ayaa la arki karaa. Xaaladaha ugufiican, indhaha bisadaha ah ee bisadaha Chrysoberyl ayaa si muuqaal ah dusha sare ugu kala qaybiya laba qaybood. Waxaan arki karnaa caano iyo malab saameyn marka dhagaxu ka dhaqaaqo iftiinka hoostiisa.
Iridescence waxaa sidoo kale loo yaqaanaa goniochromism, oo ah dhacdo halka dusha sare ee maqaarka uu soo bandhigo midabyo kala duwan sida xagasha aragtida isbedelka. Waxay si sahlan u muuqan kartaa qoorta qoryaha, xayawaanka saabuunta ah, baalasha kabuubka, hooyada lafoorka iwm. Maqnaanshaha dusha sare iyo meelaha ballaadhan ee ballaadhan ayaa u oggolaanaya iftiinka inuu ka gudbo isla markaana ka tarjumo meelo badan (isdhaafin) oo keenaya midabada badan saameynta muuqaalka. Isku dar ah faragalin, natiijadu waa mid aad u kacsan. Muraayadaha dabiiciga ah waxay muujiyaan xakameyn ay ka duwan tahay midabka jirka. Tahriibta Tahitian waxay muujinaysaa xasilooni weyn.
Qurxinta cajiibka ah ee loo yaqaan 'opal' waxay soo bandhigtaa midab qurux badan. Dabku wuxuu ka soo jeedaa Lightening Ridge, Australia (oo muujinaya jaantusyo isbeddelaya oo midabbo muuqaal ah oo madow ah) ayaa caan ku ah dhacdadan. In kasta oo ciyaartan midabku tahay nooc ka mid ah iridescence, haddana ku dhowaad dhammaan kuwa ka ganacsada dhagxaanta waxay si khaldan ugu yeeraan "dab". Dabku waa erey gemoloji ah, Waa kala firidhnaanta iftiinka oo ka tarjumaya dhagxaanta dhagxaanta. Waxaa caadi ahaan lagu arki karaa dheeman. Waa firidh fudud oo iftiinka ah. Haddii ay timaaddo opals maahan wax firidhsan oo sidaas awgeed, waxaa ku xun in la isticmaalo erayga “dabka”.
Tusaalaha ugu fiican ee isbedelka midabku waa alexandrite. Dhagxaanta iyo dhagaxan waxay u muuqdaan kuwo aad ugu kala duwan iftiinka iftiinka marka loo eego iftiinka maalinta ee dabiiciga ah. Tani waxay badanaa sabab u tahay ka kooban walxaha kiimikada iyo sidoo kale nuugista xulashada xoogga leh. Alexandrite wuxuu u muuqdaa mid cagaar ah maalinti sidoo kale wuxuu u muuqdaa casaan iftiinka dabka. Safayr, sidoo kale tourmaline, alexandrite iyo dhagaxyo kale ayaa laga yaabaa inay muujiyaan isbeddel midab leh.
Labradorescence waa nooc ciriiri ah, laakiin waa jihada ugu sarreeya sababtoo ah isku dhejinta kiriimka. Waxaan ka heli karnaa dhagxaanta dhagxaanta.